Maninona izahay Mingwang？ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
JAROTRA MARETETRA GLOBALK
Ao amin'ny tsena any ampitan-dranomasina, Mingwang dia nanangana tambajotram-pifandraisana matotra any amin'ny firenena sy faritra 100 manerantany.
Mpamatsy fitaovana manondraka avo lenta any Shina
• Fifandraisana matihanina 24/7.
Manana ekipa mandroso izahay, ekipa mpikaroka siantifika ary mpiasa teknika.
• Fanaterana haingana, fotoana fandefasana miorina.
Nomena koa ny serivisy aorian'ny varotra hahazoana antoka fa mahazo traikefa mividy mahafinaritra tanteraka miaraka aminay ianao.
1.Inona avy ireo tolotra omen'i Mingwang?
Mingwang dia manolotra tsipika famokarana ho an'ny fantsom-pitetezana boribory, fisaka, rindrina manify ary rindrina mitete mitete mitete ary koa ho an'ny fantson-drano mitete, PE ary fantsona PVC. Izahay koa dia mivarotra dripping irrigation boribory sy fisaka ary manolotra serivisy isan-karazany manomboka amin'ny drafitra tetikasa amin'ny antsipiriany ka hatramin'ny fividianana vokatra fanondrahana mikraoba; Mingwang dia mikarakara ny fiofanana amin'ny fametrahana sy ny mpiasa miaraka amin'ny fanohanana mitohy sy ny teknolojia farany hitazomana anao hifaninana amin'ny tsena eto an-toerana sy manerantany. Afaka ny ho lasa mpanamboatra mahaleo tena tanteraka ny fantsom-paritry ny rano mitete ianao, kasety mitete mitete, fantsom-pohy PE ary fantsom-pifaninanana PVC miaraka amin'i Mingwang
2.Fa maninona i Mingwang?
Mingwang dia manana traikefa amin'ny famokarana maherin'ny 35 taona amin'ny fanondrahana mitete sy PE, fantsona fantsom-bokatra PVC. Nametraka fitaovana ho an'ny orinasa malaza maherin'ny 100 izahay ary mpanjifa manampy amin'ny fananganana orinasa.
Manolotra milina avo lenta sy hafainganam-pandeha ary milamina isika, mifantoka amin'ny fahatsorana sy ny fampiasana mora ampiasaina amin'ny mpiasa kely sy tsotra. Ny milina misy antsika dia ambany fikojakojana ary nosedraina an-tsaha mba hahatanty ny toe-piainana indostrialy. Rehefa mividy avy any Mingwang ianao dia tsy vitan'ny hoe mahazo milina manara-penitra ianao, fa ny fanohanana matihanina avy amin'ny ekipanay izay natokana hanampy anao hahita fahombiazana.